Ụlọ ihe nkiri infrared Ụdị ụda ọgba tum tum na-ekpo ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Ụdị ihe nkiri infrared,Ọhụụ ọhụrụ Na-ekpo Oké Uwe Mgba Mgba,Mkpụrụ Igwe Ugbo Ala Mgba
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu ndị na-ekpo ọkụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ngwa ngwa > Ụlọ ihe nkiri infrared Ụdị ụda ọgba tum tum na-ekpo ọkụ
Ụlọ ihe nkiri infrared Ụdị ụda ọgba tum tum na-ekpo ọkụ
Ihe Nlereanya.: XHC-F019
Ihe eji ekpuchi infrared Ụdị ụda ọgba tum tum nwere ike ịme maka ụdị dị iche iche nke na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ maka uwe elu, na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ maka uwe mmiri na-ekpo ọkụ, PET maka ihe ọkụkụ, uwe iri ọkụ 12v, PET kpo ọkụ ọkụ maka slipper na-ekpo ọkụ jaket, oyi akwa ekpo ọkụ, kpoo ọkụ eletrik, uwe elu ọgba tum tum, Ụdị ihe nkiri infrared na ụdị ọhụrụ PET maka ihe ọkụ ọkụ, ihe eji emepụta ihe nkiri akpụkpọ anụ polyimide maka akpụkpọ ụkwụ, uwe, gloves, aka ọkụ, wdg, ngwaahịa, ogologo ndụ, mmepe, na-eguzogide arụmọrụ na-edegharị, nke ebiri mmiri na-ekpuchi nke ọma, ụda absorption nke ahụ mmadụ, ahụ iru ala, akọrọ na enweghị nsogbu ọzọ na ihe ndị ọzọ.
1. nwere nnukwu ọrụ ike na ogologo ndụ ọrụ
2. na hotline, ike dị arọ, dị nro, nwere ike ịdọrọ ya n'ụdị dị iche iche
3. na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ngwa ngwa, na-azọpụta ike.
4. adịghị mfe ịka nká, dịgide.
5. Nkwụsi ike nkwụsi ike, ọbụna kpo oku, okpomọkụ ọkụ, ike ọkụ nwere ike ịnwe ogologo oge ogologo, usoro mgbagha na njikwa.
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Infrared Kpọtụrụ ugbu a
Nchagharị ọkụ ọkụ kachasị ọhụrụ Kpọtụrụ ugbu a
Okpokoro ọkụ dị ọkụ na-agbanye ume na windproof Kpọtụrụ ugbu a
Ụdị ihe nkiri infrared Ọhụụ ọhụrụ Na-ekpo Oké Uwe Mgba Mgba Mkpụrụ Igwe Ugbo Ala Mgba Ụlọ ihe nkiri Sauna Ụlọ ihe nkiri oche Nnukwu ihe nkiri infrared 220V Ụlọ ihe nkiri Wine Wụlị Ụlọ ihe nkiri Sauna na UL